I-Huawei Y5: 2018, amanqaku kunye nexabiso loluhlu olutsha lokungena kweHuawei | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka yakutshanje, umvelisi waseAsia uye waba kuphela kwendlela enokubakho rimbangi yamagama amakhulu kwifowuni: i-Samsung kunye ne-Apple. IHuawei P20 Pro ngumzekelo ocacileyo woku, isiphelo sendlela esincinci kakhulu ukuba nomona zombini i-iPhone X kunye neGPS S9 +.
Kodwa, abasebenzisi abahlali nje kuphela kwisiphelo esiphakamileyo, kodwa isiphelo esisezantsi ikwangumthombo obalulekileyo wemali ongenakuyiphosa. Ukongeza, iimarike ezisakhulayo ezinjengeIndiya, yenye yezinto eziphambili kubo bonke abavelisi apho, ngamanye amaxesha, amaxabiso phantse iyinto yonke. IHuawei Y5 lubhejo lwakho lokugqibela, itheminali leyo sele ikhona eSpain.
1 Ukucaciswa kweHuawei Y5
2 Ixabiso kunye nokufumaneka kweHuawei Y5
Ukucaciswa kweHuawei Y5
I-Huawei Y5 2018, isandula ukufika eSpain ngee-euro ezingama-119 kuphela, ixabiso elingaphezulu kokuhlengahlengiswa kwezibonelelo ezinikezelwa sesi sigxina. Ngaphandle kwesixhobo, sifumana isikrini seLCD se 5,45 intshi kwi-18: 9 ifomathi kunye ne-HD + isisombululo (1.440 X 720) kunye noxinano lwamachaphaza nge-intshi ye-295.
Ngaphakathi sifumana 2 GB yememori ye-RAM esebenza ngokudibeneyo ne-MediaTek's 4 6739-core processor. Ikhamera, yenye yezona ndawo zibaluleke kakhulu kwii-smartphones kule minyaka idlulileyo, isinika isisombululo esiphezulu se-8 mpx ngasemva, esinokurekhoda kuyo iividiyo kwisisombululo se-1080p ubuninzi beefreyimu ezingama-30 ngomzuzwana. Ngaphambili, sifumana ikhamera yangaphambili ye-5 mpx.
IHuawei Y5, ibetha imarike ngayo I-Android 8.1 OreoInonxibelelwano lweBluetooth 4.2, i-16 GB yokugcina yangaphakathi (indawo esinokwandisa ngayo sisebenzisa amakhadi e-MicroSD) kunye nebhetri eyi-3.020 mAh, esiza kuthi ngayo sikwazi ukunyamezela imini yonke kunye nenxalenye elandelayo ngaphandle kwengxaki, nangona ixesha liphezulu ngandlela, 3 kunye nesiqingatha seyure, kuba ayinikezeli ukuhambelana kwetyala ngokukhawuleza.
Ixabiso kunye nokufumaneka kweHuawei Y5
I-Huawei Y5 ngoku iyafumaneka eSpain ngee-euro ezingama-119, ixabiso elingaphezulu kokuhlengahlengiswa kwezibonelelo ezibonelelayo. Ukuba ujonga i-terminal yeWhatsApp, tsalela umnxeba amaxesha ngamaxesha kwaye uthathe iifoto ezingaqhelekanga, ngaphandle kokuchitha imali eninzi, le modeli yeHuawei lukhetho oluhle kakhulu lokucinga ngalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IHuawei Y5: 2018, amanqaku kunye nexabiso lokungena kweHuawei
Ezona zixhobo zibalaseleyo zokuhamba kweli hlobo
HyperX Pulsefire Surge mouse yokudlala ngoku iyafumaneka